AS ROMA VS INTER MILAN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha AS ROMA VS INTER MILAN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli...
AS ROMA VS INTER MILAN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan
(Roma) 19 Luulyo 2020 – Waxaa caawa isku dheggan labada naadi ee waawayn ee AS Roma vs Inter Milan oo ku ballansan gegada Stadio Olympico ee magaalada Roma. Inter ayay rajo yari markale kasoo gashay horyaalka, tiiyoo ay Juve oo 6 ka sarreeysaa Isniinta wajahayso kooxda Lazio.
Dhanka Roma: Fonseca ayaa dib u helaya Smalling, balse waxaa ka maqan Zaniolo oo kubka ka sheeganaya. Khadka dhexe waa Cristante oo ka horreeya Diawara, halka ay daafaca boos isku hayaan Bruno Peres iyo Zappacosta.
Dhanka Inter: De Vrij iyo Young ayaa shaxda 1′ kusoo bilaabanaya. Conte ayaa khadka dhexe Brozovic, ka gadaal dheelsiinaya Lautaro-Sanchez oo weerarka ka nasinaya Lukaku. Barella waa soo noqday waxaana garab taagan Gagliardini.
Previous article”Imaaraadku waa BURCAD-BADEED!” – Erdogan oo weeraray arrin ay Masar & Imaaraadku ka wadaan Libya
Next articleQalanjada Bollywood & gabadheeda oo isbitaal loola cararay (Maxaa xaalkooda iska bedeley?)